बाइबलका कथाहरू: बाबेलमा चार जना केटा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
राजा नबूकदनेसरले सबैभन्दा शिक्षित इस्राएलीहरूलाई बाबेल लैजान्छ। केही समयपछि, राजाले उनीहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर र बाठा केटाहरूलाई छान्छ। तीमध्ये चार जना केटालाई तिमी चित्रमा देख्न सक्छौ। उनीहरूमध्ये एक जनाको नाउँ दानियल हो। अरू तीन जनाको नाउँचाहिं बाबेलका मान्छेहरूले शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगो राख्छन्।
नबूकदनेसरले यी केटाहरूलाई आफ्नो दरबारमा काम गर्नका लागि तालिम दिन चाहन्छ। तीन वर्षसम्म तालिम दिएपछि सबैभन्दा बाठाहरूलाई राजाले छान्नेछन्। तालिम पाइरहेको बेला ती केटाहरू बलिया अनि स्वस्थ भएको राजा चाहन्छ। यसकारण आफू र आफ्नो परिवारले खाने मीठा-मीठा खानेकुरा र दाखमद्य यी केटाहरूलाई पनि दिनू भनेर राजाले आफ्ना चाकरहरूलाई अह्राउँछ।
चित्रमा दानियललाई हेर त। उसले नबूकदनेसरका चाकरहरूको नाइके अशपनजलाई के भन्दैछ, तिमीलाई थाह छ? दानियलले ऊ राजाको भान्साबाट ल्याएका मीठा-मीठा खानेकुराहरू खान चाहन्नँ भन्दैछ। यो सुनेर अशपनज चिन्तित हुन्छ। उसले यसो भन्छ: ‘तिमीहरूले खाने र पिउने कुराको फैसला राजाबाट भइसकेको छ। तिमीहरू अरू केटाहरू जस्तै स्वस्थ देखिएनौ भने राजाले मलाई मार्न सक्छन्।’
यसकारण आफू र आफ्ना तीन जना साथीहरूको हेरविचार गर्न अशपनजले नियुक्त गरेको कारिन्दाकहाँ गएर दानियल यसो भन्छ: ‘हामीलाई १० दिनसम्म जाँच्नुहोस्। हामीलाई खानलाई सागपात र पिउनलाई पानी मात्र दिनुहोस्। त्यसपछि राजाका मीठा-मीठा खानेकुरा खाने अरू केटाहरूसित हामीलाई दाँज्नुहोस् र को बढी स्वस्थ देखिन्छ, हेर्नुहोस्।’
कारिन्दाले दानियलको कुरा मान्छ। दस दिनपछि दाँजेर हेर्दा त दानियल र उसका साथीहरू अरू जम्मै केटाहरूभन्दा स्वस्थ देखिन्छन्। त्यसपछि त्यो कारिन्दाले राजाले पठाएको खानेकुराको सट्टा सागपात नै खाने अनुमति दिन्छ।
तीन वर्षपछि, ती जम्मै केटाहरूलाई नबूकदनेसरकहाँ लगिन्छ। उनीहरू सबै जनासित कुरा गरेपछि राजालाई दानियल र उसका तीन जना साथीहरू नै सबैभन्दा बाठो लाग्छ। यसकारण राजाले आफ्नो काममा लगाउन उनीहरूलाई दरबारमै राख्छ। राजाले दानियल, शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगोलाई कुनै कुरा सोध्दा अथवा कुनै गाह्रो समस्या सुल्झाउन दिंदा राजाका पूजाहारी अनि ज्योतिषीहरूले भन्दा १० गुणा बढी राम्रो जवाफ दिन्थे।
चित्रमा देखाइएका यी चार केटाहरू को हुन्? उनीहरू किन बाबेलमा छन्?
नबूकदनेसरले यी चार केटाहरूलाई के गर्ने विचार गरेका छन्? उसले आफ्ना सेवकहरूलाई के गर्न अह्राउँछ?
दानियलले आफू र आफ्ना तीन साथीलाई कस्तो खानेकुरा अनि पिउने कुरा दिन बिन्ती गर्छ?
दानियल र उसका तीन साथीलाई दस दिनसम्म सागपात खान दिएपछि नबूकदनेसरको कारिन्दाले के फरक भेट्टाउँछ?
दानियल र उसका तीन साथी कसरी राजाको दरबारमा पुग्छन् र उनीहरू कुन-कुन तरिकामा अरू पूजाहारी अनि बुद्धिमान् मान्छेहरूभन्दा श्रेष्ठ ठहरिन्छन्?
दानियल १:१-२१ पढ्नुहोस्।
प्रलोभनमा नपर्न अनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई जित्न हामीले कस्तो प्रयास गर्नै पर्छ? (दानि. १:८; उत्प. ३९:७, १०; गला. ६:९)
आजका युवायुवतीहरू कसरी कसै-कसैलाई ‘मीठा-मीठा’ लाग्ने कुराहरूप्रति लोभिन वा कसैको दबाबमा पर्न सक्छन्? (दानि. १:८; हितो. २०:१; २ कोरि. ६:१७-७:१)
चार हिब्रू केटाहरूबारे बाइबलमा दिइएको घटनाबाट हामी सांसारिक ज्ञानबारे के कुरा बुझ्ने मदत पाउँछौं? (दानि. १:२०; यशै. ५४:१३; १ कोरि. ३:१८-२०)